Wararkii ugu dambeeyey Dab saacado ka hor qabsaday qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha – STAR FM SOMALIA
Wararkii ugu dambeeyey Dab saacado ka hor qabsaday qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha
Dab xooggan oo duhurnimadii maanta ka kacay qeybo ka mid ah suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa goor dhow oo qorax dhacii ah lagu guuleystay in la demiyo.
Gaadiidka dab demiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud ayaa si weyn uga qeyb qaatay deminta dabkaas oo illaa hadda aan la ogeyn sababaha kiciyey.
Dukaamo iyo bakhaaro waaweyn oo ku yiilay halka loo yaqaano qeybta Cabdalla Shideeye ee Suuqa Bakaaraha iyo qeybta timirta ayaa dabkan uu waxyeelo xoogan u geystay.
Ganacsatada laheyd qeybaha uu dabku qabsaday ayaa sheegay in khasaare hantiyeed oo aad u xoogan uu ka soo gaaray dabkan, balse aysan hadda sheegi karin tirakoob sax ah.
Ma ahan markii ugu horeysay ee dab uu qabsado Suuqa Bakaaraha balse dabkan maanta ayaa ah mid aad u yar marka loo eego gusahooyinkii waaweynaa ee suuqaas soo maray sanado ka hor.
Doorashada Gudoomiyaha Aqalka sare oo hada bilaabatay
Sarkaal ka tirsan Shabaab oo lagu dilay Gobolka Baay